Amacebo okuSebenza ngokuTwitter | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 1, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndiyayithanda idatha ekule ngxelo ivela kwi-Buddy Media kunye ne-infographic evela kwiFusework Studios. Idatha yalatha kumathuba amashishini ekufuneka ebandakanyekile nabathengi xa bekho, cela abalandeli babo ukuba bathathe inyathelo, kwaye bagcine umyalezo ulula. Ewe kunjalo, ndihlala ndikhuthaza abathengi bethu ukuba bavavanye kwaye balinganise, nabo. Mhlawumbi abo ukhuphisana nabo abenzi i-tweeting ngeempelaveki- inokuba lixesha elifanelekileyo lokuba uqokelele ingqalelo.
Ukuba ungathanda ukubona yonke idatha engemva kwe-infographic, khuphela ingxelo epheleleyo yeBuddy Media, amaQhinga okuSebenza ngokuKhangela: UkuHlalwa kwakhona kweNkcazo. Kwaye, qiniseka ukujonga i-infographic yethu Izizathu zokuba ungalandelwa kwi-Twitter!
tags: Izitudiyo zefuseworkswandise iitweets zakhoTwitter
I-Buddy Media kunye ne-Salesforce Cloud
Agasti 1, 2012 ngo-4: 24 PM
Enkosi ngokwabelana nge-infographic kwindawo yakho, uDoug. Siyayixabisa ngokwenene!